Top 3 Kem chống nắng Allie loại nào tốt được ưa chuộng nhất | Muasalebang - Muasalebang
Top 3 Kem chống nắng Allie loại nào tốt được ưa chuộng nhất | Muasalebang
Đang Đọc: Top 3 Kem chống nắng Allie loại nào tốt được ưa chuộng nhất | Muasalebang in Muasalebang
Yisho imigqa ukuvikela ilanga kuwufanele ukuthenga namuhla, kungaba iphutha ukungayinaki I-sunscreen ka-Allie. Lona umugqa womkhiqizo osebenza kokubili ukuvimbela imiphumela yama-ejenti ayingozi emvelweni, kuyilapho uvikela futhi unikeza izakhi esikhumbeni ngokuphumelelayo. Ngakho-ke masithole ngokushesha imininingwane ethokozisayo ngalo mugqa we-Allie wokuvikela ilanga!
1 I-Allie sunscreen iphuma kuliphi izwe?
2 Ingabe i-Allie sunscreen ilungile?
3 Imibandela yokukhetha isikrini selanga esilungile se-Allie
3.1 Khetha i-Allie sunscreen ngokusho kohlobo ngalunye lwesikhumba
3.2 Khetha i-Allie sunscreen ngokusho kwenkomba yokuvikela ilanga
3.3 Khetha ngokuya ngohlobo lwe-Allie yokuvikela ilanga
4 Buyekeza ama-Allie aphezulu aphezulu angu-3 adumile namuhla
4.1 1. I-Kanebo Allie UV Mineral Moist Neo Sunscreen SPF50+ Premium
4.2 2. I-Allie Extra UV Perfect sunscreen yellow isetshenziswa kabanzi
4.3 3. I-Kanebo Allie UV Perfect α Isikrini selanga kufanelekile ukusithenga
5 Imiyalo yokuthi ungasebenzisa kanjani i-Allie sunscreen ngempumelelo
5.1 Okwe-Allie gel sunscreen
5.2 Okwe-Allie Milky sunscreen
I-Allie sunscreen iphuma kuliphi izwe?
Njengoba kushiwo ngaphambili, i-Allie sunscreen ingumkhiqizo ukuvikela ilanga Isetshenziswa kabanzi futhi isetshenziswa kabanzi namuhla. Lona umkhiqizo ovela enkampanini yezimonyo yase-Kanebo yase-Japan.
Lapho, i-Kanebo brand yasungulwa ngo-1887, inomlando omude wokuthuthuka amakhulu eminyaka. Imikhiqizo yomkhiqizo we-Kanebo ihlale ithandwa eJapan futhi iya ngokuya idume emazweni amaningi emhlabeni jikelele.
Ngaphandle kwalokho, imikhiqizo enegama le-Kanebo ingumphumela wocwaningo oluqhubekayo ngezinhlobo zesikhumba ezineminyaka ehlukene. Ngenxa yalokho, ubusuku buza ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kahle okuphezulu nokuphepha kumakhasimende. Ngaphezu kwalokho, yonke imikhiqizo inezicucu zemvelo, ezihlanganiswe nobuchwepheshe besimanje nobuchwepheshe bokukhiqiza, okuholela kukhwalithi engcono kakhulu.
E-Vietnam, ungakwazi ukuthenga kalula imikhiqizo yangempela yalolu hlobo ngokusebenzisa abasabalalisi abaningi. Futhi imigqa yemikhiqizo eshisayo ye-Kanebo namuhla ingashiwo njengamafutha okugcoba, izihlanzi…Futhi ikakhulukazi, isikrini selanga sika-Allie esisetshenziswa kaningi.
Ingabe i-Allie sunscreen ilungile?
Ngokweseluleko sochwepheshe, ucwaningo oluningi luye lwabonisa lokho I-sunscreen ka-Allie Iqukethe izithako eziphephile, zemvelo ezinobungani. Ngakho-ke, uma isetshenziswa esikhumbeni somsebenzisi, iphephe ngokwedlulele futhi inikeza imiphumela emihle kakhulu.
Umkhiqizo uzuza ngenxa yobuchwepheshe bakamuva bohlobo lwe-Kanebo lwe-Friction-proof anti-friction. Ngenxa yalokho, isendlalelo selanga somkhiqizo siqinile futhi sihlala isikhathi eside. Kungakhathaliseki ukuthi uthintana namanzi, noma ukujuluka uma usebenza.
Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo waziswa kakhulu ngokuvikeleka kwawo elangeni okuphezulu kakhulu nge-SPF50+/PA+++++ isici sokuvikela ilanga endaweni ephephile ngangokunokwenzeka. I-Allie sunscreen isiza ukuvikela isikhumba emisebeni ye-UVA ne-UVB, kuyilapho ithuthukisa ukunakekelwa kwesikhumba, ivimbela ukumila kombala, amabala nokucekelwa phansi kwemvelo.
Ngaphandle kwalokho, ifakwe ubuchwepheshe besimanje be-Skin-fit iphinde isize isendlalelo selanga sika-Allie sisabalale ngokulinganayo endaweni yesikhumba. Ngisho noma isikhumba sakho sibushelelezi noma izimbotshana zakho zikhulisiwe. Ivimbela imiphumela emibi engabangela umdlavuza wesikhumba, inciphisa ukunwebeka futhi isheshise ukuguga kwesikhumba. Ngakho-ke i-Allie sunscreen yinhle, kufanelekile ukuyithenga futhi kufanelekile ukuyisebenzisela ukuvikela okuhle nokunakekela isikhumba.
Imibandela yokukhetha isikrini selanga esilungile se-Allie
Kufanele wazi ukuthi akuwona wonke ama-sunscreen afanele isikhumba sakho. Ngakho-ke, udinga ukusekela kulezi zindlela ezilandelayo zokukhetha uhlobo I-sunscreen ka-Allie engcono kakhulu futhi esebenza kakhulu kuwe.
Khetha i-Allie sunscreen ngokusho kohlobo ngalunye lwesikhumba
Wonke umuntu uzoba nohlobo oluhlukile lwesikhumba, akekho ofana, ngakho-ke uhlobo lwesikhumba ngalunye luzoba nomugqa ofanelekile wokuvikela ilanga. Lapho ukhetha i-Allie sunscreen udinga ukusekela isikhumba sakho nesimo sesikhumba.
Isibonelo, uma isikhumba sakho sizwela, akufanele ukhethe i-Allie sunscreens equkethe izithako ze-PABA. Uma unesikhumba esomile, kufanele ukhethe uhlobo olunamakhono amahle okuthambisa kanye nokuthambisa.
Khetha i-Allie sunscreen ngokusho kwenkomba yokuvikela ilanga
I-Kanebo okwamanje yethula amamodeli amaningi amasha okuvikela ilanga, ngakho inkomba yokuvikela ilanga yohlobo ngalunye izohluka. Amakhasimende kufanele akhethe imikhiqizo enezilinganiso zombili ze-SPF ne-PA ukuze ivikelwe ngendlela engcono kakhulu.
Khetha ngokuya ngohlobo lwe-Allie yokuvikela ilanga
U-Allie unomugqa wonke i-sunscreen ngokomzimba kanye namakhemikhali afanele uhlobo ngalunye lwesikhumba. Ngakho-ke ungakwazi ukusekela kumvelo yomkhiqizo ukuze ukhethe ofaneleka kakhulu kuwe.
Buyekeza ama-Allie aphezulu aphezulu angu-3 adumile namuhla
Ihlose ukukusiza ukuthi uthole i-Allie sunscreen ehamba phambili yesikhumba sakho. Maduze sizobuyekeza ngokushesha oku-3 okuphezulu I-sunscreen ka-Allie esetshenziswa kakhulu namuhla.
1. I-Kanebo Allie UV Mineral Moist Neo Sunscreen SPF50+ Premium
Njengamanje, i-Kanebo Allie UV Mineral Moist NEO SPF50+ PA++++ isikrini selanga saziwa njenge-sunscreen enenkomba yokuvikela ephezulu. Sibonga ukukhiqizwa ngokobuchwepheshe besimanje baseJapan, ngokuzibophezela okuphelele kwikhwalithi.
Umkhiqizo awusizi nje kuphela ukuvikela emiphumeleni eyingozi yemisebe ye-UVA ne-UVB kodwa futhi unikeza ikhono eliphumelelayo lokuthambisa.
Ngaphezu kwalokho, isikrini selanga se-Allie UV Mineral Moist NEO SPF50+PA++++ sinohlu lwesithako olunokukhishwa okubuthakathaka okuvela ezingxenyeni zemvelo ezizuzisayo ezifana ne-Royal jelly, i-seaweed, i-brown algae, i-collagen ne-hyaluronic acid … Ifanele izinhlobo eziningi zesikhumba, kanye ukunciphisa ukucasuka kwesikhumba ngokuphumelelayo.
Nge-sunscreen SPF50+PA++++, lesi futhi yisixazululo sokusiza ukuthuthukisa isikhathi sokuvikela isikhumba. Ngesikhathi esifanayo, vimba imiphumela eyingozi yemisebe yelanga ngenxa ye-spectrum ebanzi ephumelelayo. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yesithako esisebenzayo se-Hyaluronic Acid, i-royal jelly isiza ukuthuthukisa ukushelela kwesikhumba, ukondla isikhumba, kusenze sithambile futhi sibushelelezi.
Lo mkhiqizo we-sunscreen unamandla oku-alkalize, ukuvikela isikhumba ngisho nalapho ujuluka kakhulu, noma uhlangana namanzi kahle kakhulu. Ngaphandle kwalokho, isakhiwo sekhilimu sisesimweni esibushelelezi se-liquid, lapho sisetshenziswa, kuyoba ne-primer ekhanyayo, emnene engasetshenziswa njenge-primer lapho yenza.
I-Allie UV Mineral Moist NEO nayo iyindlela yokwelapha ephumelelayo yokuvimbela ukukhula kwamabala ansundu, ukushuka, amabala, i-melasma ebusweni. Kanye nokuthuthukisa ithoni yesikhumba, ukusiza isikhumba sikhanye sinempilo.
Lesi sikrini selanga se-Allie sihlatshwe umxhwele idizayini yaso esiliva, edonsa amehlo, imibukiso ebukeka kahle. Ngaphezu kwalokho, ukubamba kulula futhi ukuvuleka nokuvala, ukuma okuhlangene, kulula ukuyisebenzisa nokuhamba nawe noma ngabe uyahamba noma uya ohambweni lwebhizinisi.
Intengo yereferensi ye-Kanebo Allie UV Mineral Moist Neo SPF50+ ivikela ilanga cishe i-540,000 VND
2. I-Allie Extra UV Perfect sunscreen yellow isetshenziswa kabanzi
Ulayini uwumugqa wesikrini selanga onokwakheka okuncane nokulula, ngakho-ke wunyakazise kahle ngaphambi kokuwusebenzisa ukuze uthole umphumela ongcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, lapho lo mkhiqizo usetshenziswa esikhumbeni, udonswa ngokushesha kakhulu, ukhululekile, futhi usize isikhumba sikhuphuke kancane.
Lo mkhiqizo uyisivikelo selanga esibonakalayo esinesithako se-Zinc Oxide futhi esilungele zonke izinhlobo zesikhumba, okuhlanganisa nesikhumba esizwelayo nesithandwa yizinduna. Isici esikhethekile kakhulu somugqa I-sunscreen ka-Allie Le Extra UV Perfect iyifomula Yokufakazela Amanzi Amanzi, ehlanganiswe ne-SPF 50+, PA+++++ yokuvikela ilanga ukuze kwakheke umgoqo wokusiza ukuvikela isikhumba kuma-ejenti ayingozi.
Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ubuye unamathele kahle esikhumbeni kungakhathaliseki ukuthi ungaphandle ngokujuluka ngokweqile noma lapho ubhekene namanzi. Usengaqiniseka ukuthi isikhumba sakho sivikelwe kakhulu.
I-Allie yellow sunscreen ifakwe ubuchwepheshe be-Friction Proof anti-friction ukuze kwandiswe ukuvikeleka kwe-UV, ukuvimbela ukukhukhuleka, nokulahlekelwa lapho kuhlikihlwa izingubo phakathi nemisebenzi yansuku zonke.
Ngokuqondile, umkhiqizo uqukethe i-hyaluronic acid ne-Collagen enenzuzo kakhulu esikhumbeni. Ngakho-ke, umkhiqizo awuvikeli nje kuphela isikhumba elangeni kodwa futhi usiza ukuthambisa isikhumba futhi uthambisa isikhumba ngokuphumelelayo. Ngaphezu kwalokho, lesi sikhuseli selanga se-Allie asina-Paraben, asinawo amakha, futhi siphephile esikhumbeni sakho.
Kodwa-ke, ukungalungi kwalo mugqa we-sunscreen ukuthi ikhono lokulawula uwoyela liyisilinganiso kuphela, kufanele ucabangele ngaphambi kokusebenzisa.
Intengo eyireferensi ye-Allie Extra UV Perfect sunscreen icishe ibe ngu-400,000 VND/ 60ml.
3. I-Kanebo Allie UV Perfect α Isikrini selanga kufanelekile ukusithenga
I-Allie UV Perfect alpha iwumugqa wokushisa ilanga oshisa kakhulu emakethe namuhla. Ngenxa yenkomba ephezulu kakhulu yokuvikela ilanga, iyakwazi ukuvikela isikhumba kahle ngaphansi komthelela welanga elinzima lasehlobo.
Ngefomu lobisi oluwuketshezi olumunca kalula esikhumbeni, i-Allie sunscreen ikunikeza umuzwa opholile, onethezeke ngokwedlulele futhi onethezekile uma usetshenziswa. Kanye nokuqinisekisa ukuthi isikhumba asinamafutha, sizwakala sibushelelezi futhi sithambile. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo uqukethe isithako esiphelele somswakama esivela ku-hyaluronic acid ukwandisa ukugcinwa komswakama ukusiza ukunciphisa ukoma uma usetshenziswa esikhumbeni.
Ngaphandle kwalokho, i-Kanebo Allie alpha sunscreen SPF50+ / PA ++++ iphinde ifakwe ikhono lokulwa nokukhuhla ngezingubo, izikhwama, imaski, amathawula… Lokho kukuvumela ukuba uqiniseke ukuthi isikhumba sakho siyohlala sivikelwe ngokuphelele ngaphansi kwelanga elishisayo lasehlobo. . Ungakwazi ukujabulela imisebenzi lapho uya ogwini, ukubhukuda noma ukudlala ezemidlalo, imisebenzi yangaphandle.
Akugcini lapho, umkhiqizo uqukethe ne-Q10, izithako ze-Collagen ezisiza ukunciphisa amabala ansundu, amabala amnyama nokuvimbela ukuguga. Ngesikhathi esifanayo, kuletha isikhumba esithambile nesibushelelezi, ukukhanya okunempilo okumangalisayo.
Okuhle kunakho konke, lesi sikhuseli selanga sinokumelana namanzi ngokwedlulele nokujuluka futhi sihlolelwe ukumelana namanzi okusebenzayo imizuzu engama-80 echibini.
Ngaphezu kwalokho, elinye iphuzu elingeziwe le-Kanebo Allie ulayini wokuvikela ilanga ongokoqobo, oqukethe i-Zinc Oxide, elungele labo abanesikhumba esibucayi noma isikhumba esinezinduna.
Intengo eyireferensi ye-Kanebo Allie UV Perfect α icishe ibe ngu-450,000 VND/60ml.
Imiyalo yokuthi ungasebenzisa kanjani i-Allie sunscreen ngempumelelo
Ukukusiza ukuthi wenze okuningi ngomlingo we-Allie’s sunscreen. Ukusetshenziswa okulungile kuzoletha imiphumela engalindelekile, futhi nakanjani awuzeqi lezo zinyathelo.
Okwe-Allie gel sunscreen
Isinyathelo 1: Abasebenzisi badinga ukuhlanza isikhumba, bese besebenzisa esikhumbeni cishe imizuzu engu-20-30 ngaphambi kokuphuma emnyango, bechayeka elangeni.
Isinyathelo sesi-2: Bese uthatha ijeli ye-sunscreen bese uyisebenzisa ngqo esikhumbeni sonke futhi ukhumbule ukuphinda usebenzise ukhilimu ngemuva kwamahora angaba ngu-3-4 nesicelo sangaphambilini ukuze ugcine umphumela.
Okwe-Allie Milky sunscreen
Isinyathelo 1: Abasebenzisi badinga ukunyakazisa kahle ngaphambi kokusetshenziswa ukuze izithako ezisele phansi komkhiqizo zihlanganiswe ndawonye.
Isinyathelo sesi-2: Ngemva kokuba usugcobe ungqimba lwe-lotion, bese ufaka ungqimba oluncane lwe-Allie sunscreen esikhumbeni esidinga ukuvikelwa elangeni futhi ungakwazi ukuphuma ngokuphepha endlini.
Qaphela ukuthi ngemva kosuku lokusebenzisa i-sunscreen ukuze usebenze ngaphandle, udinga ukususa umkhiqizo ngokuhlanza namanzi ahlanzekile ukuze ugweme ukubangela ukucasuka nokungahambi kahle esikhumbeni.
Nalu ulwazi oluwusizo mayelana I-sunscreen ka-Allie “ziyavunguza” emakethe namuhla. Sethemba ukuthi lolu lwazi luzokusiza ube nokubukeka okusha, futhi lukusize uthole umkhiqizo ongcono kakhulu wokuvikela ilanga esikhumbeni sakho!
Xem Thêm [Review] Sữa rửa mặt Cosrx Low PH good morning gel cleanser | Muasalebang
Siêu phẩm tầm trung, Giá 12.99 tr | Muasalebang
Dell Latitude E7240- Dòng Ultrabook nhỏ gọn, thông minh và tiện dụng | Muasalebang